Land seizures continue in Zimbabwe - UPI.com
Zimbabwe government land seizures continue
Oct. 25, 2012 at 3:38 PM
HARARE, Zimbabwe, Oct. 25 (UPI) -- Suspected Zanu PF activists invaded CAPS Holdings owner Frederick Mutanda's farm in Mutorashanga, Zimbabwe.
CAPS is a debt-ridden Zimbabwean pharmaceutical company.
Mutanda on Tuesday accused Zimbabwe Minister of Local Government and National Housing Ignatius Chombo, who is Zanu PF secretary for lands, of sending Zanu PF militants to invade his Ravie Farm in Mutorashanga.
Zimbabwean Mashonaland West provincial Chairman John Mafa stated however, "I have never spoken to anybody about Mutanda's farm but he was told to produce papers that prove he is the rightful owner by (Mashonaland West governor and resident minister) Faber Chidarikire.
"Personally, I have nothing against Mutanda or anybody else, so I never sent people to go and invade his farm. What I remember is that when I sat on the lands committee, Mutanda was asked to produce documents that proved his ownership and I'm not sure he has done that yet," Newsday news agency reported Wednesday.
What makes the case unusual is that land expropriation was a Zanu PF tactic primarily utilized against Zimbabwe's white farmer minority, rather than against black Zimbabwean government officials.
Outside View: Chaos in Zimbabawe